Daawo:-Hal sano ka dib weerarkii Aqalka Dowladda Hoose ee Xamar (Warbixin) - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Daawo:-Hal sano ka dib weerarkii Aqalka Dowladda Hoose ee Xamar (Warbixin)
Maanta oo kale 24-kii Bishii July ee sanadkii 2019 xilli galab ah ayaa qarax la sheegay in uu ahaa ismiidaamin waxaa uu ka dhex-dhacay xarunta Maamulka Gobolka Banaadir,waxaana qaraxaasi ku geeriyooday mas’uuliyiin.
Xilliga uu qaraxa dhacayay ayaa waxaa socday kulan uu shir guddoominayay Guddoomiyihii G/Banaadir ahaana duqa Muqdisho Eng, Cabdiraxmaan Yariisow,waxaana dhaawac culus oo qaraxaasi kasoo gaaray Eng Yarisoow uu ugu geeriyooday dalka Qatar 1-dii Bishii Agoosto.
Dadka qaraxaasi ku geeriyooday ayaa waxaa kamid ahaa, Guddoomiyihii degmada C/Casiis Sabaax C/laahi Asad, guddoomiyahii degmada Waaberi, Mahad Cilmi, guddoomiyihii degmada Shangaani, Sahra-zad Sheekh Maxamed, Agaasimihii nadaafadda C/fitaax Cumar Xalane, agaasimihii shaqaalaha gobolka Banaadir, C/laahi Dheere, la taliye dhanka sharciga ahaa Xasan Sabriye.
Halkan Ka Daawo Warbixinta iyo Wariye Maxamed Abuukar Dabaashe.
Previous articleAxmed Madoobe oo sheegay in la bilaabay xalinta Arrimaha Gobolka Gedo
Next articleBeesha Caalamka oo ka hadashay Go’aanada Shirkii Dhuusamareeb dalbatayna doorasho toos ah